Dunida waxay ku socotaa da ‘ahaan dijitaalka ah va hadeyi aad u maleyneyso in ganacsigaaga a saameyn doonin, mar kale ka fikir. Haddii aad tahay wakiil hanti ma guurtada ah, waxaanay ka shaqeyneysay ku-saleysi, vicitaanno qabow iyo habab kale oo dhaqameedyo, a kula wadaagno fikiradaha qaarkood.
Sida laga soo xigtay Ururka Qaran ee Rieltorlar (NAR), 42 boqolkiiba iibsadaha guryaha ee 2017 waxay qaadeen talaabadooda koowaad ee iibkooda iyaga oo eegaya khadka internetka ee guryaha la heli karo. Marka la barbar dhigo, boqolkiiba 17 waxay la xiriiraan wakiilka guryaha kirada ah marka hore. Haddii aad lakulantay wejigaaga oo ka ort fərqi və dhexeeya tirooyinka – ka walwalsan, maadaama ay ka sii xumaaneyso oo keliya.
Waxaad maqashay erayada da ah; "Haddii aadan garaaci karin, ku biiri"? Taasi waa sida ay tahay inaad ka fikirto inaad sameyso.
Qüve dijital ah, iibsadaha guryaha ayaa qalaya habka loo sii wanaajiyo xaaladaha suuqyada, mumi la eegayo guryaha iyo mum badan. Inta badan waxay bilaabaan nidaamkooda waxbarasho inta aysan xitaa la xiriirin wakiil.
Isticmaal isbeddelkaan isla markaana və baro macaamiishaada müstəqbalka marka hore – adigoo isticmaalaya boggaaga gaarka ah.
Nidaamka dhabta ah ee dejinta veb-ka rəsmiga ah ma aha mum adag. Dhamaan waxaad və baahan doantaa magac domain, veb sayt martigelinta, ya da laga yaabee ini isticmaalo veb-dhise-eynie ama shaashad WordPress və ya sameyso mumyaabo qurxoon iyo shaqeyn.
1 1. Dejinta Up Fondu: Domain, Hosting, Vebsayt İnşaatçısı
1.1 Domain Adları
1.2 Qalabka Veb-ka
1.4 Noqo orta dhamaystiran
2.1 Media Sosial Suuq
2.2 Axtarış motorları və SEO
2.4 Google Yerli Ticarət
2.5 Bu dhiirrigeli martidaada inay isdiiwaangaliso
3 Qaybinta suuq-geynta ugu wanaagsan ee Rieltorlar: Suuq-geynta Emailka
3.1 Maxay tahay səbəbta Suuq-geynta Emailka?
4 Tusaalooyinka websaytka Daşınmaz əmlak
4.1 1. Weichert Rieltorlar
4.2 3. Alison James Estates və Guryaha
1. Dejinta Up Fondu: Domain, Hosting, Vebsayt İnşaatçısı
Hoyga martigelintu waa ganacsi aad u qoto dheer, qoz-fındıqda qoz-fındıq və ya bolt və ya halkaan, maksimum yeelay WHSR ilə anicinta şabakada adeeg bixiyeyaasha veb.
Kaliya fiirso oo dareem bir bixiyaha webka bixiyaha ee kuu fiika adiga ganacsigaaga. InMotion Hosting və ya A2 Hosting ilə tanış olmaq, qapı və qapı qapısının açılması.
Anigu kama hadlayo sanduuqa raadinta sahlan oo dadka isticmaala ay wax ku qori karaan oo ku sawiraan boggaaga, lakiin mum ka caawiya inta badan dadka isticmaala raadinta nolosha dhabta ah.
Tusaale ahaan, waxay u badan tahay inay rabaan guryaha guryaha gaarka ah, inta u dhexeysa qiimaha qala duwan ama xitaa tiro gaar ah oo musqulo ah. Hubi inay heli karaan waxa ay raadinayaan!
Tusaalaha nolosha ee dhabta ah: Sanduuqa soo jeedinta ayaa la keenaa markaad gujiso raadinta bogga Lian Jia (Pekin, Shiinaha) bogga.
Talo Cusub: WordPress ilə ünsiyyət qurmaq üçün mobil dostluq. Kuwaas waxaa badanaa loo yaqaan ‘Mawduucyada Maqalka’.
Noqo orta dhamaystiran
Anoo ah wakiilada guryaha, waxaan hubaa inaad ogtahay baahida dadka badankooda ee raadinaya hanti. Xasuuso kuwa dukaamada iibka ah ee aad u baahneyd inaad mar walba wado? Wanaaqsan.
Qeyri-ixtiyari aqoontaada boggaaga. Marka laga reebo macluumaadka kaliya ee ku saabsan hantida lafteeda, xasuuso inaad bixiso macluumaad dhammeystiran oo taageeraya, sida nadaafada agagaaraha, jidadka ya meelaha waxbarashada.
Tusaale ahaan nolosha nolosha: Guryaha Guru (Malayziya) sidoo kale waxay bixiyaan hagaha hagaajinta ee degaanka iyo xisaabiyaha deynta lagu qaato ee boggooda.
Tilmaamaha Degdegga ah: Kalsooni ha ahaadee, laakiin maaha inaad gasho Qırmızı waa hal shay, laakiin badhanka ku jira guduud dhalaalaya leh iftiin jilicsan waa uun -!
Mar labaad, tani waa wax aad adigu ama dhici karto sida si aan u sameeyo, laakiin aan u fasaxo sidan – Haddii dadka soo iibsadaha ah ee kuu soo dohaweynaya aysan dhageysanayn, waxaad xaqiijin karta inan dagagale. Təəccüblü bir şey, talaabo və ya şeg macluumaadka loaga baahan yahay si ay uya eynieyaan go’aano iibsi oo wanaagsan.
U sheeg waxyaalaha faa’iidada ah ee iibsashada meelaha qaarkood, tusaale ahaan, ama in gurigan uu ku dhow yahay meel ganacsi oo cajiib ah oo leh mum kasta oo qorraxda ka hoosaysa. W ogadaow sida ay u sahlan tahay helitaanka wadada ee Wadada Dhexe ama mum kasta oo kale oo caawiya.
Tusaale ahaan nolosha nolosha: Trulia (Maraykanka) saamiyada cilmi baarista iyo isbedelka suuqyada si ay mumi u baraan isticmaalkooda.
Tilmaamaha Degdega ah: Xaalad kasta ha noqotee qapıashada doofaarka ama fudaydka, xusuusnow inaad muujiso xirfadlaha marxaladaha oo dhan – Yoxdur Mickey Mouse və Donald Duck fadlan!
Sababta oo ah waxaad leedahay bog ah miknaheedu maaha inaad u fariisan karto halkaa oo ka filan macaamiisha in ay soo qala daadadka. N + 1 ilə Xusuusnow ao soo sheegnay dhowr cutub oo ka sarreeya? Xaqiiqadu waxay ahaanaysaa, oo waxaad u baahan tahay inaad hubiso in boggagaaga la arko.
Media Sosial Suuq
Tani waa hal zinak oo suuq-geyn ah oo la isbahaystay sannadihii la soo dhaafay. Warbaahinta Bulshadu waxay qaadatay meel bannaan oo xayaysiis ah oo ganacsiyada dhaqameed badani ay burburiyeen. Hubi giriş qapısı bumao adigoo dooranaya hal barnaamijka Sosial Mediada bir istedmaasho oo aad u isticmaasho taas si kor loogu qaado boggaaga internetka oo la falgalo fursadaha.
Warbaahinta Bulshadu waa dheecaan badan oo ka dhexjirto boggaga internetka, sidaas waxaad u oggolaan karta shakhsiyaadkaada inay ku iftiiminayaan iyaga oo la xiriiraya iyaga. Waxa kale oo ay aad u fiican yihiin abuurista hype iyo farxad, markaa ka feker tartanka tartanka ama fuddeyn fudd. Xasuuso bandhigyada guriga ee aad furan tahay? Dhiirrigelinta Warbaahinta Bulshadu waa xaqiiqda, inkastoo ay tahay qaab muuqaal ah.
Facebook-a müraciət etmək istərdim, istərsə saxla, Saxaafadda e-aad dooratay, waxaad yeelan doontaa faa’iido dheeraad ah – Wada hadalada. Nidaamyadan jawaab celinta ah ayaa ah qaabka soo socda ee habka isgaarsiinta waxtarka leh ee kaa caawin doona inaad ku guulaysato macaamiil dheeraad ah.
Sida saxda ah, waxaad ku xayirnaan karta kuwan bilaashka ah (xaaladaha qaarkood) iyo xeelado xoog leh si ay u siiyaan macaamiisha macluumaadka, xawaarida waxttiyada jawaabta guud ahaan, u dhaqmee sidaad adiga inta kate hays. Ka akhriso mum badan oo ku saabsan wargeysyada ku jira suuq-geynta.
Dhamaan kuwan waxay və kordhinayaan markaad ilə bir veb saytı-kaaga kaas oo heli doona macluumaad dhamaystiran, waxaad noqon doontaa guusha.
Axtarış motorları və SEO
Orta ka orta ah siyaabaha ugu fud ee lagu heli karo gaadhi yar oo ka badan waa in la hubiyo inaad liiska ku qorto boggaaga mashiinka raadinta ee raadinta. Google və ya Bing oo kaa caawin doona marka ay dadku raadinayaan adeegyada sida kuwaaga baxın. Waxaa ugu wanaagsan dhammaantood, liiskan waa bilaash.
Hase yhehehee dhisme dreraad ah, ya kastaba ha ahaatee, və arin və muhiim ah: Axtarmaq üçün axtarış motoru (SEO).
Markaad dhisayso boggaaga internetka, hubso in aad isha ku hayso ereyada muhiimka ah ee si cad u qeexaya sida fric, sida: Daşınmaz əmlak, Mülkiyyət, ama şuruudo la mid ah.
SEMRush waa qalab aad u awood badan oad aad u isticmaasho si aad u hesho macluumaad istaraatiijiyadeed oo ku saabsan isbeddellada, falanqaynta ereyada muhiimka ah iyo waxyaabo kale oo badan
Xusuuso taas ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan ‘açar sözlər’ caawimaad aad u badan. Kuwani waxay kaa caawin doonaan inaad hubiso inaad hesho gaadiidka saxda ah iyo haddii aad la barbardhigayso kuwa xoogga leh waxaad hubin doontaa inaad ogaato makiinadaha raadinta.
Ogsoonow: Ino dhisato waxtarka SEO waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyn kartid si aad u wado taraafikada boggaaga. Waqti ku qaad sidan! Halkan waxaa ah dhowr qalab oo SEO ah oo aad xiiseyn karti si ay kaaga caawiso inaad isdhaafsatid isbeddellada, eyni qodobbada muhiimka ah iyo waxyaabo kale:
Bing Alətləri Veb ustası
Marka laga reebo ilalinta makiinadaha raadiyaha ah ee daneynaya adiga iyo baabuur wadista gaadiidkaaga si aad u heshid, tayada tayada leh ee ku xiran martidaada ayaa kaa caawin doonta inaad beddesho fursadaha iibsadaha. Baahidaasi ma aha mid si toos ah ula xidhiidha iibinta hantida, xitaa xitaa mum aan waxba ka jirin sida "10 Fikradaha Dib-u-hagaajinta Guriga" waxay ku siin doontaa fikiradaha soo booqdahaaga oo abuuri doona gaadiid deraera ah.
Waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad ku darto qaybta ‘blog’ qaybtaada meesha aad ku qori karto nooca nooca ah. Tani waxay ka caawineysaa si aan caadi ahayn in ay dhalinayso taraafikada goobtaada. Uma baahnid inaad qorto marar badan, xitaa hal mar asbuucii ama wax kale yolu fiican tahay, laakiin diiradda saar si aad u dhisto waxyaabo adag oo ah warar iyo xiiso leh.
Fikrad ahaan, qor waxyaabaha ay kuwa kale doonayaan pay, oo waxaad haysataa nidaamka xayaysiisyada oo bilaash ah!
Google Yerli Ticarət
Google aha oo kaliya mashiinka raadinta, laakiin waa waxa aan jeclahay in a u u yeedho shirkadda suuq-geynta ee ugu weyn aduunka. U dir boggaaga Ganacsiga Ganacsiga Google o kaliya ma sameyn doonan taas oo bilaash ah, laakiin waxay ku siin doonaan talooyin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo horumariyo ganacsigaaga.
Bu dhiirrigeli martidaada inay isdiiwaangaliso
Baba badan aysan jeclayn in ayda diiwaan-geliyaan, xaalado badan ay badanaa tahay səbəbi oo ah foomamka isdiiwaangelinta badankoodu aad ayay uag tahay. Xasuusnow, muma aad u baahan tahay vaa orta fud – magaca, cinwaanka iimaylka iyo ogolaanshaha si ay ula xariiraan qalabka suuq-geynta. Mum kasta oo kale ayaa badanaa waa uun cidhiidhiga.
Samee nidaamka diiwaangelinta hal-mar, oo ah ortlan oo sahlan isla markaana sameynaayo xogtaada macaamiisha. Tani waxay noqon doontaa orta qiimo badan oo ku saabsan müstəqbalkaaga suaq-geynta, hahaan veb saytı-kaaga oo waxaan ku tusi doonaa sida ku xiga.
Qaybinta suuq-geynta ugu wanaagsan ee Rieltorlar: Suuq-geynta Emailka
Marka booqdayaashu ay yimaadaan goobtaada, waxay u eegi doonaan hareeraha guud ahaanna waxay eynieyaan wax adiga kuu ah ah. Təqdim olunan veb sayt, veb saytı kaagu wuxuu u baahan yahay inuu helo macluumaad badan oo soo jiidasho leh macaamiisha qala duwan. Tani waa halkaa oo ah suuq-geynta e-maylka ee ku habboon.
Suuqgeynta emailka la beegsado ayaa kaa caawin kara inaad abaabulto ololayaal ujeedooyin gaar ah. Qaado tusaale ahaan haddii aad leedahay glut ah guryaha xeebaha si kor loogu qaado. Mowduuc eyni eyni ololaha e-poçt göndərmək üçün e-poçtla yazın və ya qadadkaas markaana və duceyso qof kasta oo waligiis ka diiwaangashan boggaaga kahor!
Hadafkan, waxaan uga mahadcelinayaa tiro badan oo qalab ah oo aad ku talagashay. Hore ee ku jira barmaamijkaaga, yiskaaga liiska suuqgeynta e-mailkaagu waxay u badan tahay inay yar yahiin waxaana lagu maamuli karaa adeeg bilaash ah ama raqiis ah. Markaad korto, waxaa jira sidoo kale fursado qapı ah oo badan oo aad qala dooran kart.
Qaar ka orta ah qapıshooyinka ku jira booska suuq-geynta emailka waxaa ka mid ah magacyo aad u caan ah oo ay ka orta yihiin Xiriir qoşulma, MailChimp, Iyo ActiveCampaign.
Şaxsi ahaan, isagoo isticmaalaya meherado dhowr ah oo kumbuyuutar ah kahor, Daimi əlaqə wuxuu dareemayaa wanaag qurux badan. Waxay leedahay dhamaanba goobaha (iy və ya bada) goobta xirfadlaha ah ay bixiso halka ispan marka ay leedahay interfeysi interfeysini fudd oo aan si weyn u cabsi gelin doonin. Fairfaahin zəhmət olmasa Fırlan akhri Dib u eegis Xiriir joogto ah.
Marka liskaaga korayo waxaad sidoo kale helaysaa waayo-aragnimo ahic istismara qalabyada suek-geynta e-poçtla yazmaq.
Maxay tahay səbəbta Suuq-geynta Emailka?
Suuq-geynta Emailka waa inuu ahaadaa diiraddaada dadaalkaaga iibka. Vaa orta aad u awood badan oo noqon kara dhiirigelin ganacsi oo weyn haddii la eynieyo hab sax ah. Waxay ku siinayaan fursad gaar ah qiimaha kharashka ku baxa ee macmiilka – marwalba maalin kasta.
McKinsey, e-poçtla əlaqə yaratmaq üçün 40 məktub göndərin və ya Facebook-dan Twitter-də göndərin və Twitter-də göndərin..
Iyada oo la adeegsanayo qalabka suuq-geynta emailka oo xooggan oo mum ku ku ool ah, waxaad ku dhisi kartaa xiriiryo xoogan oo joogto ah oo aad la yeelan kartid iibsadahaada müstəqillik.
Mar kasta oo e-poçt göndərmək üçün bir şey göndərmək lazımdır, kalaamadaadu waxay u muuqataa baba ku wejiya wajiyadooda – tixgeli xarashka kaa soo qala.
Waxa kale oo ay ku siinaysaa mum aad u badan hababka dhaqameedka – macluumaadka. Xogta waxaa loo falanqeyn karaa qaababka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad barato sida jecel, jaahwareerka iyo istcmaalka macaamiishaada. Tani waxay kuu ogolaaneysaa bir wax ka bedesho ololayaasha müstəqbalka ee waxtarka ugu sareeya.
La bilaabo-da vah dhaxso iyo fud. Sida bogagga internetka, qalabyada suuq-geynta oo badan oo maanta ah ayaa bixiya adeegyo fudd oo la adeegsado jiiditaanka iyo isku-xirnaanta si aad si dhaqso ah u dhisi kartid warkaaga. Xitaa haddii aadan ahayn naqshadeeye, waxaa laga yaabaa in ay jiraan sheybaar aad samayn karto.
Sizə müraciət etmək istərdim, istərsə, istər-istəməz elektron poçtla göndərin. Bu ddhso farxad saba sansan munaasabadaha soda socda iyo in dadku sugaan si xamaasad leh!
Ka fiiri qaraalka WHSR Suite geyə bilmək üçün elektron poçt göndərmək istər bloggerlər, istərsə də sevirəm.
Tusaalooyinka websaytka Daşınmaz əmlak
1. Weichert Rieltorlar
Veb sayt: corenyc.com
Core waxay qaadatay saaxiibtinimada mobil bal mumu oo aad u fog oo ah dareenka in hadda ay tahay masiinka yar oo si xun loola dhaqmo. Əlbətdə ki, səbəbtoo miisaaniyadu waxay leeyihiin sawirro balaadhan oo loo isticmaalo, laakiin wicitaanka degdegga ahi ma aha orta loogu talagalay qaybtaas isticmaala.
Nadiifinta goobta waxay ku dhammaaneysaa mum kasta oo dhuumasho ah oo ka tagaya booqdaha si ay u raadiyaan shaashadda meesha laga tagayo.
Dadka isticmaala ay ku socanan
3. Alison James Estates və Guryaha